​कहाँ–कहाँ ढल्यो लेनिनको शालिक ?
Tue, Mar 26, 2019 | 15:43:27 NST
फागुन २५ – बीसौँ शताब्दीका सबैभन्दा महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली व्यक्तित्वमध्येका एक भ्लादिमिर लेनिनको मृत्यु भैसके पनि उनको विचारधारलाई धेरैलाई प्रभाव पारेको छ ।
सन् १९९१ मा सोभियत संघ नढल्दासम्म लेनिनको विचारधाराको प्रभाव निकै नै थियो ।
लेनिनका समर्थकले उनलाई समाजवादी नेताका रुपमा हेर्छन भने आलोचकले भने एक तानाशाहका रुपमा । ठूलो परिमाणमा भएको राजनीतिक अत्याचार र हत्यामा उनलाई दोषी ठहराउनेहरु पनि छन् ।
भर्खरै भारतको त्रिपुरा विधानसभाका बीजेपीले जित हात पारेको ४८ घण्टामै बुलडोजर लगाएर रुसी क्रान्तिका नायक लेनिनको प्रतिमा भत्काइएको थियो । तर लेनिनको शालिक ढलाइएको यो पहिलो घटना भने होइन । योभन्दा पहिलो विश्वका धेरै ठाउँमा लेलिनको शालिक ढलाइएको छ ।
१. यूक्रेनमा ठूलो संख्यामा लेनिनसँग जोडिएका धरोहर भत्काउने काम भएको छ । सन् २०१३ देखि २०१५ को बीचमा यूक्रेनमा लेनिनका झण्डै ५ सय शालिक भत्काइएको छ । यो तस्बिर सन् २०१३ को हो जहाँ लेनिनको शालिक घनले हानेर भत्काइएको थियो । लेनिनको शालिक भत्काउने समूहले रुसको नजिक भएको भन्दै यूक्रेनका राष्ट्रपतिको विरोध गरेका थिए ।
२. सन् १९९१ मा बर्लिनका मेयरले लेनिनको शालिक भत्काउने आदेश दिएका थिए । उनले तानाशाही प्रवृत्ति झल्काउने कुनै प्रतिमा आफूहरुलाई मान्य नहुने बताएका थिए ।
३. सन् २०१४ को सेप्टेम्बरमा यूक्रेनकै खारकोभ शहरमा लेलिनको मूर्ति भत्काइएको थियो । यस घटनाको प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थियो । २०१७ को अगस्टसम्म यहाँ लगाइएका लेनिनका सबै शालिक हटाइएको थियो ।
४. सन् १९९० मार्च ५ मा रोमानियाको राजधानी बुकारेस्टमा दुई वटा क्रेनको सहयोगले स्टेट पब्लिसिङ हाउसको अगाडिको लेनिनको शालिक हटाएको थियो ।
यस्तो भनिन्छ कि यदि तपाईँ कुनै देशका बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ कस्तौ प्रतिक बनाइयो भन्दा पनि कस्तो प्रतिक हटाइयो भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । यही कुरा भारतको त्रिपुरा राज्यमा पनि लागू हुन्छ । जहाँ २५ वर्षदेखिको वाम किल्ला तोडेर बीजेपीले सरकार बनाएको छ ।